thinzar's blog: Bukit Tabur Hiking Trip
Labels: outdoor activities, photos, places in Malaysia
Bukit Tabur Hiking Trip
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Bukit Tabur ကို သွားခဲ့တယ်။ ဗာလင်တိုင်းဒေး အမှတ်တရ ဖြစ်သွားတယ်။ သူများတွေက ရိုမန်တစ် ဆန်ဆန် နူးနူးညံ့ညံ့ ဖြတ်ကျော်တဲ့နေ့တစ်နေ့မှာ တို့တွေက တောင်သွားတက်တယ်။ :-D တောင်ပါတ်လယ် ဝန်းရံထားတဲ့ မြို့မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပေမယ့် တောင်ပေါ်ကို တစ်ခါမှ လမ်းလျှောက် မတက်ဖူးဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်က ဒုတိယမြောက်အကြိမ် တောင်တက်ခြင်းဘဲ။ (ပထမ တစ်ခေါက်က ကျောင်းက မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့ Hutan Lipur Kanching ရေတံခွန်ကို တက်တုန်းက။ ပင်းတယတောင်ကို တက်တာ လှေကားနဲ့ တက်တာဆိုတော့ hiking category ထဲမဝင်လို့ ပယ်တယ်။) ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်း တော်တော်များများလိုက်မယ် ဆိုတာနဲ့ လိုက်သွားဖြစ်တယ်။ ဗာလင်တိုင်းဒေးမှာ ဝီရိယ ကြီးကြီးနဲ့ မနက် ၅နာရီခွဲလောက် ထပြီး လာခေါ်မယ့် သူငယ်ချင်းကို ထိုင်စောင့်နေတယ်။ ခြောက်နာရီ လာခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေက ခြောက်နာရီခွဲလောက် သူတို့ကို ဖုန်းဆက်တော့မှ နိုးသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ တောင်ပေါ်တက်ပြီး နေထွက်တာ ကြည့်မယ့် အစီအစဉ်က ပျက်ရော။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်ဘဲ။ မလေးရှားမှာ နေတာ ဒီလောက်ကြာပြီ။ မလေးလူမျိုးတွေ ခြောက်နာရီ လာမယ်ဆိုရင် အတိအကျ စောင့်နေမိတုန်းဘဲ။ အမှတ်သည်းခြေ မရှိသေးဘူး။ ရနာရီကျော်လောက်မှ လူစုံတယ်။ Taman Melawati မှာ လူစုပြီး ကားနဲ့ ၁ဝမိနစ်လောက် ထပ်မောင်းတော့ တောင်ခြေကို ရောက်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်က ဒီ Bukit Tabur ကို မကြာခဏ တက်ဖူးတော့ ဒီခရီးမှာ သူက လမ်းပြပေါ့။ နေစစထွက်ချင်း ရနာရီခွဲလောက်မှာ စတက်ကြတယ်။ နေသိပ်မပူသေးတဲ့အချိန်မို့ ရာသီဥတုကလည်း သာသာယာယာ ရှိတယ်။ တောင်တက်လမ်းကနည်းနည်းကြမ်းတော့ အရမ်း သတိထားပြီး တက်ရတယ်။
တစ်ချို့နေရာမှာ နည်းနည်း ပြေပေမယ့် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အရမ်းမတ်တယ်။ ဂရုစိုက်ပြီး တက်နေရတာနဲ့ ဓါတ်ပုံတောင် သိပ်မရိုက်နိုင်ဘူး။ ခြေလျင်တောင်တက် အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တောင်တက်နေသလား ထင်ရအောင် သူတို့တွေက အရမ်းကို မြန်လွန်းနေတယ်။
တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တော့ နေတောင် နည်းနည်း မြင့်နေပြီ။ မနားတမ်း တက်မယ်ဆိုရင် နာရီဝက်လောက်ဘဲ ကြာမယ်ထင်တယ်။ ကျမတို့တစ်တွေတော့ တောင်ထိပ်မှာ ခဏနား ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြန်ဆင်းတာ ၉နာရီခွဲလောက်မှာ တောင်အောက် ရောက်တယ်။ ၂နာရီလောက် ကြာသွားတာပေါ့။
ငှက်ကလေးတွေ တကျီကျီ၊ လေကလေးက တဖြူးဖြူး၊ တောတောင် သဘာဝကလည်း သာယာတော့ တောင်တက်ရတာ အိပ်ရေးမဝတာ ပင်ပန်းတာတွေတောင် ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး။
တောင်ပေါ်တစ်နေရာကနေ မြင်ရတဲ့ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှုခင်း (ဟိုးမှာ KLCC နဲ့ KL tower တွေ့လား။ တွေ့လား။ ဟိုးမှာလေ။ :D)
ဒီနေရာလေးက အိမ်တွေအားလုံး ခေါင်မိုး နီနီလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ တောင်ကြီးနဲ့ ဘယ်လို တူမှန်း မသိဘူး။
ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့သူနဲ့ တစ်ခြားမြို့/တစ်ခြားနိုင်ငံ ရောက်နေတဲ့သူတွေကလွဲရင် အားလုံး ပြန်ဆုံကြတော့ မထင်မှတ်ထားဘဲ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ခရီးလေး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကင်မရာက ဒုတိယံမိ service center ကို အလည်သွားနေတဲ့အတွက် ဖုန်းကင်မရာနဲ့ဘဲ ရိုက်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ချို့ပုံတွေကို သူငယ်ချင်းတွေနားကနေ ယူသုံးမယ်ဆိုတော့ သူတို့လည်း အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ပုံမတင်သေးတာနဲ့ ကိုယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတစ်ချို့နဲ့ဘဲ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခု ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်ရတယ်။ professional ကင်မရာနဲ့ရိုက်ရင် ရှုခင်းတွေက တော်တော်လှမှာ။ ကြုံဦးမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခေါက် ခပ်စောစောသွားပြီး နေထွက်တာ ကြည့်ချင်သေးတယ်။ တောင်တက်ရတာ ပင်ပန်းပေမယ့် အပေါ်ရောက်သွားရင် မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းက ကိုယ့်ကို အမောပြေစေတယ်။ (တောင်အောက်ရောက်မှ ပင်ပန်းတာ။ အဆင်းမှာ တော်တော် ညောင်းနေပြီ။ မကြာခဏ ချော်လဲတော့ ဒူးတောင် တော်တော်ပွန်းသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာတော့ ဒါပါနဲ့ ဆို နင်ချော်လဲတာ ငါးခေါက်ရှိပြီတဲ့။
အရင်နှစ် နိုဝင်ဘာလလောက်တုန်းက ကောင်မလေးတစ်ယောက် တောင်တက်ရင်း ပြုတ်ကျလို့ ၃ရက်လောက် မေ့သွားသေးတယ်တဲ့။ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ပြီးမှ တောင်တက်သင့်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက် ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရနိုင်တယ်။ သူများတွေ ရိုက်ထားတာ ရေလည် မိုက်တယ်။ http://thetrekkers.blogspot.com - ဒီဘလော့ဂ်မှာ Bukit Tabur တက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် information ရနိုင်ပါတယ်။
Not to disappoint some of my friends who visit my blog, and got puzzled looking at those rectangle and rounded scriptures, I decided to dropafew lines in English for each entry. I went forahiking trip with some of my ex-UIA friends (and their friends) last Saturday. Around 15 people showed up, made the trip the more the merrier. We met at Taman Melawati then moved on to Bukit Tabur at about 7:30am. It took about half an hour to reach the peak. The bird's eye from above the hill was so breathtaking. I just managed to snapafew pictures with my handphone (my camera was at the service centre for the second time because of some dead pixels.) But, N73's pictures are considerably ok isn't it? Afterafew adjustments in Picasa and Paint.NET (I don't have photoshop, sob sob~) Thanks to everyone, I really enjoyed the trip and would love to go there again next time especially to see the sunrise. :-)
hi, log on to your website, why is it the words all in squares ? Just last week we managed to snap some sunrise photos, you want ? tan agnes
19/2/09 12:18 PM
အစ်မ တောင်ချွန်းတက်ဖူးလား..။ ကျွန်တော်တော့မတက်ဖူးသေးဘူး..။ နောက်ဆုံပုံက တောင်ကြီနဲ့ဆင်တယ်..။
19/2/09 1:30 PM
Tan agnes>> yup, I would love to see the sunrise photos.. have u uploaded it somewhere? may i have the link? (most of my blog content is in Burmese language, hence u see all squares without font.)
Phyo Evergreen >> တောင်ချွန်းပေါ် မရောက်ဖူးသေးဘူး။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရင် ရောက်အောင် သွားရမယ်။ တောင်ကြီးမှာ နေတုန်းတော့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ဘဲ။ အခုမှ တောင်ကြီးပြန်ပြီး တောင်တက်ချင်လာတယ်။ :D
19/2/09 3:23 PM
19/2/09 3:47 PM
ဪ မလေးစော နေထွက်ကိုး။ မှတ်သားစရာပဲ း)
နောက်အခါတွေဆို ချော်လဲတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ညီမ။ အပြောမခံနဲ့။ ထပ်ကျင့်လိုက် ဟိ။
ပုံလေးတွေက ကောင်းပါတယ်။ မနက်ခင်း တောင်တက်ရတဲ့ အရသာကို မှန်းပြီး ခံစားလိုက်တယ်။ ကျေးဇူး။
20/2/09 4:17 AM
hi thinzar, the photos are in my blog, it's tag with my blog address http://thetrekkers.blogspot.com.
The look of Burmese language is interesting, i think burmese will be very very good in numbers & Maths, am i right to say this ? you have so many numbers to remember.
22/2/09 12:53 AM
nice photos... Thinzar ...
23/2/09 5:03 PM
မခင်ဦးမေ>> noted! :)
မနုသွဲ့>> တောင်တက်အသင်းတွေ ဘာတွေ သွားဝင်ပစ်လိုက်ဦးမယ် :)
Tan agnes>> thanks. I just went to view the photos. fantastic! Aha, not sure about Burmese, but I'm particularly interested in numbers :)
dr-nelly>> aha.. I know how much u love to see sunrise :)
23/2/09 5:07 PM
Wow pictures look like that'savery scenic place. No wild life?? I love mountains.
24/2/09 10:59 AM
Zatlite>> at first I was afraid that snakes might come out, but I didn't see any. The hill is somewhere quite near to the city andafamous spot for trekkers, so, no wildlife, I assume :D
24/2/09 4:09 PM
Hi Thinzar! whatsalate comment :) how can I reach there to the button of that highland. I suppose I would take LRT and stop at either Gombak Station (the destination)or Station Taman Melawati. How can I go there from that point? I amanature loving tour operator based in KL. I dont believe your assumption that no wildlife over there :) as Malaysia is very rich in eco-diversities. Perhaps this could enjoy my Sunday overthere for birdwatching. Awaiting your reply. Thanks
29/6/09 2:25 PM
Asian Tour Operator>> Hi, I don't remember the exact road to get there, since my friends were the one who drove. There are many routes up the hill, n we took the easiest one. There could be some wildlife inhabiting in the other routes. sorry for couldn't be able to guide u the exact way to get there.
29/6/09 2:55 PM
Thanks for your swift reply. Are you monitoring your blog for 24 hours? :) I took your link.. Once again.. thanks... let me know once you have done your future post.. I would be eager to read then.
29/6/09 3:13 PM
Asian Tour Operator>> aha.. I change the blog settings to send notification to email once there'sacomment. So that whenever I'm online, I can reply once i receive the notification :)
30/6/09 10:04 AM
Geng: Adventure Begins
စာအုပ်အညွှန်း - Deception Point
Fake email & ID Theft